ME AND MY FEELINGS: 2010
गजल - रहर
नसोध भो साथी, मेरो के खबर छ ।
नदिको थ्यो चाह, साथमा बगर छ ।
एकातिर मेरा, रङ्गीन सपना,
छ अर्कोतिर यो, रङ्गहीन शहर छ ।
जहरै पिएर, बाँचे आजसम्म,
जहरै पिएर , मरुँ यै रहर छ ।
मरी जाने चोला, छोड लोभ लालच,
कमाई विपुल धन, भन को अमर छ ।
गजल--- सुटुक्क म भन्छु केही
सुटुक्क म भन्छु केही, मेरो कुरो मान्छ्यौ भने ।
साटौ मुटु सँगै ज्युँने, मर्ने कसम खान्छ्यौ भने ।
लाखौं माझ मैले आज, तिमी छाने आफ्नै माने,
छैन कर आउ वर, आफ्नो मलाई ठान्छ्यौ भने ।
जस्तो पर्ला उस्तै टर्ला, छोडी डर अघि सर,
आउने बाधा आधा आधा, सरोबरी धान्छ्यौ भने ।
हुन्न देख्या हुन्छ लेख्या, भन्ने भनुन् भन्दै गरुन्,
चढाइ डोली लान्छु भोली, भन यदी जान्छ्यौ भने ।
Posted by Jitendra Malla Labels: गजल5comments
गजल - मायामा
((प्रेमिल भावका गजलहरु छ्यापछ्याप्ती भएर होला, मैले यस्ता गजललाई कहिले पनि PRIORITY दिईन । केही साथीहरुको आग्रहमा आज प्रेमिल भावको गजल पुरा गरें । ))
देउता खोज्न यता उती, भौतारिदै डुली हिंडें ।
संजोगले तिमी भेटें, त्यही देउता भुली हिंडे ।
या देउतालाई चढाई देऊ, या मनैमा सजाइ देऊ,
तिम्रै मनको बगैचामा, बेफिक्री म फूली हिंडें ।
डुल्छु तिम्रै सेरो फेरो, मै रहिन अब मेरो,
के डर भो र दुनियाँको? म मायामा खुली हिंडे ।
मायाको त वैरी जगै, तिमीविना के ज्युँनु खै,
कस्ले सक्छ अलग गर्न? म तिमीमै घुली हिंडें ।
गजल -- अलग
दृश्य उही, नजर अलग ।
कहाँ छ र ? सगर अलग ।
वारी पारी, तिमी र म,
नदी उही, बगर अलग ।
पीडा यौटै, भोगाइ यौटै,
छ त केवल, शहर अलग ।
गजल उही, जिन्दगीको,
मात्र यहाँ, बहर अलग ।
गजल--- बर्सी दे न झरी
बल्दैछ मन झन झन, निभाउनु छ, बर्सी दे न झरी ।
सुकिसके नयन, भिजाउनु छ, बर्सी दे न झरी ।
कुहिरोले आज, छोप्यो धर्ती, हराएँ म कतै,
बादलु छ गगन, खुलाउनु छ, बर्सी दे न झरी ।
रापिलो तापिलो, द्वन्द मनको, आन्दोलित छन् अङ्ग,
शितलु जो खोज्छन्, रिझाउनु छ, बर्सी दे न झरी ।
जगै ढल्यो घरको, फुल्नै छाडे, सुवासीला फूल,
शुन्य भयो आँगन, ब्युँताउनु छ, बर्सी दे न झरी ।
खडेरीले छोयो, मरे रहर, आज पालुवामै,
नवैलियोस् "जीवन", जोगाउनु छ, बर्सी दे न झरी ।
तीजको रहर गयो बरी लै !!
((यस कथामा भएका सम्पूर्ण पात्रहरु काल्पनिक छन् । यदी कसैको वास्तबिक जीवनसित मेल खान गएमा संयोग मात्र कहलाईनेछ । महिलावादी संस्थाहरुले भेटे भने यो गीतको रचनाकारलाई जुत्ता चप्पल उपहार नदेलान् भनेर भन्न सकिन्न । म के भन्छु भने, ती जुत्ता चप्पल, बाढिपहिरो पीडितहरुलाई दिनु होला, मलाई आवश्यकता छैन । :P)) --
माइतिमा 'दर', खाईन् उन्ले, मैले घरमै 'दारु' खाएँ ।
जसरी नि मान्नु न हो, यो सालको तीज मनाएँ ।
खाली खल्ती रित्याउँछ, बर्शै दिन तीज आउँछ ।
कही न'भा फेशन-सेशन, कल्ले यिन्लाई सिकाउँछ ।
सुक्को थे'न खल्तिमा त, ऋण खोज्न धेरै धाएँ ।
जसो तसो दशा टर्‍यो, यो सालको तीज मनाएँ ।
साथीसंगी नाच्ने उस्तै, उस्ले गीतमै गाली गर्छे ।
बुझ्नै गार्‍हो माया उस्को, मेरै लागि भोकै बस्छे ।
तिम्रो कस्ती छ ओ साथी? मैले यस्ती बुढी पाएँ ?
शीतन बिनै चुस्की लाएँ, यो सालको तीज मनाएँ ।
गजल -- मौन भएँ
नबोलेरै बोले सबै, म बोलेर मौन भएँ ।
खोल्नै पर्ने मनका कुरा, नखोलेर मौन भएँ ।
पिरतिको बाटो कठिन, भन्थे यहाँ भन्नेहरु,
भावनाको आधीँ चल्यो, छिचोलेर मौन भएँ ।
सफल हुन्थ्यो कथा हाम्रो, दुइटा मुटु यौटै भए,
उन्को माया यो मुटुमा, नघोलेर मौन भएँ ।
जोडीन् उन्ले मिठो नाता, खुशी थिएँ साथ पाई,
जाती थियो सपना नै, बिथोलेर मौन भएँ ।
Posted by Jitendra Malla Labels: गजल3comments
गजल - देऊ
छुट्टीनु नै, छ भने नि, दुई किनारको दूरी देऊ !!
उडाइ लगोस्, सबै याद, यस्तो कुनै हुरी देऊ !!
मिठो बोली मुटु रेट्दा, दुखिसकें दुख्नु जति,
तीतो बरु अझै तिखो, वचनको त्यो छुरी देऊ !!
तिम्रो प्राण मेरो भन्थ्यौ, त्यसैले न जिएको छु,
मरी मरी बाँच्न गार्‍हो, मर्छु लौ मन्जूरी देऊ !!
तिमीलाई साथ दिंदा, दुनियाँमा एक्लो भएँ,
बेवारीसे लाश छ मेरो, बिन्ती तिमी कुरी देऊ !!
गजल दोहोरी !!!
आशु शर्मा !!
मेरो माया यति टाढा किन देख्यौ भन
मुटु घोच्ने काडें शब्द किन लेख्यौ भन
छाती भित्र सजाको'छु फोटो तिम्रो भन्थ्थौ
त्यही फोटो आज फेरी किन फेक्यौ भन
नछुट्टीने बाचा खाई टाढा जानु रैछ
एक्लै हिड्थें मेरो बाटो किन छेक्यौ भन
माया गर्नु तिमीलाई गल्ती भयो कि त ?
भरोशामा यत्ति साह्रो किन टेक्यौ भन
तिमी बिना जिउनुको अर्थ छैन भन्थ्यौ
मनमुटुको मेरो नाम किन मेंट्यौ भन
दोश लाउँछ्यौ ऐले मलाई, पैले तर्किएर गयौ ।
आलो थियो मनको घाऊ, नुन छर्किएर गयौ ।
सजाएँथे तस्विर तिम्रो, मनको आँगनमा मेरो,
बहाइ लग्यौ झरी सँगै, जब दर्किएर गयौ ।
वाचा थियो साथै ज्युँने, खोजेँ निभाउन मैले,
दोबाटोमा आईपुग्दा, अन्तै लर्किएर गयौ ।
माया गर्छु भर पर, भन्दा झुटो मानी हिड्यौ,
आउँदै थिएँ तिमीतिरै, आँफै फर्किएर गयौ ।
टुट्यो नाता बह्यो 'आँशु', मुटु चस्कीरह्यो अझैं,
जोडीएको मुटुबाट, जब चर्किएर गयौ ।
गजल: यस्तो गजल रच्न सकुँ ।
तिम्रो मुटु चस्स पारोस्, यस्तो गजल रच्न सकुँ ।
ढुङ्गाले नि आँशु झारोस्, यस्तो गजल रच्न सकुँ ।
आँटे बाँच्न माया विना, घृणा सहुँ कसोरी म,
माया पाली घृणा मारोस्, यस्तो गजल रच्न सकुँ ।
भन्थ्यौ मनको राजा मलाई, सुखी राज्य चाह मेरो,
पीडा तिम्रा यतै सारोस्, यस्तो गजल रच्न सकुँ ।
खेल होइन पिरती यो, जित्नै पर्छ भन्ने छैन ,
बरु मेरै जीत हारोस्, यस्तो गजल रच्न सकुँ ।
पसिना सिंचे ।
हरियो मरुभुमी ।
डलर खेती ।
उजाड वन ।
झरेका पातहरु ।
उस्तै यो मन ।
गुराँसे लाली ।
मन फिक्का मेरो यो ।
तिम्रो सिउँदो ।
आकाश गर्ज्यो ।
खै के ब्यथा सुनायो ।
मनै रुझायो ।
तिम्रो नै याद ।
यी चिसा चिसा रात ।
प्यारी सिरक ।
कनिका भेटें ।
हातमुख जोर्नुछ ।
दाउरा भिजे ।
लुक्यो चन्द्रमा ।
छायो हेर अँध्यारो।
नजिक आऊ ।
कैले अचल ।
कैले साउने भेल ।
मनै त हो ।
Posted by Jitendra Malla Labels: हाइकु0comments
गजल - के भयो र?
के भयो र यौटा साथ, छुट्यो छुट्न दिएँ ।
मन भन्नु शीशा न हो, टुट्यो टुट्न दिएँ ।
दिनु साटो खोस्न मात्रै, जान्यो भाग्यले नि,
अलिकती खुशी थियो, लुट्यो लुट्न दिएँ ।
दोश तिम्रो हो कि मेरो, या त नियतिको,
अन्यौलको भुमरीले भुट्यो भुट्न दिएँ ।
जिन्दगी हो जसो तसो , ज्युँनु पर्छ सोची,
अठोट लिई मन मेरो, उठ्यो उठ्न दिएँ ।
गजल --- ब्यथा नारीको !!!
नियतिको खेल यही, भोग्दै जाँदा धेरै जानें ।
प्यारो जन्म घर छोडि, पराइ घर आफ्नो मानें ।
छोरी थिएँ अब भने, बुहारी पो भएछु म,
रहर मारे उड्ने सबै, पिजंडा यै मैले छानें।
समाजको रित यस्तै, नारी न हुँ अभागी म,
निसन्तान हुँदा सबले दोश जती मेरै ठाने ।
झुक्किएर अन्तै नजर, जाँदा पनि पापिनी रे,
मेरो देउता भने छानी, छानी अर्कै फल खाने ।
पुछिएको सिउँदो सँगै, काख रित्तिएको बेला,
टोकी छोरा अनि लोग्ने, भन्ने वचन वाण हाने।
जता पनि जहाँ पनि दु:ख मात्रै यो'जीवन'मा ,
मुक्ती देऊ छिट्टै प्रभु, भनीदेऊ कैले लाने ?
((जस्ले देख्न र सुन्न सक्नुहुन्न, उहाँहरुप्रती समर्पित यो रचना !!!))
देख्दिन म तिमीलाई तर पनि देख्ने रहर ।
सुन्दिन म बोली तिम्रो तर पनि सुन्ने रहर ।
हेर्न खोज्छु प्रकृति यो, कालो रात आँखा सित ।
सुन्न रोज्छु मिठो धून, हुन्छ घात भाका सित ।
अपुरो भो प्रकृतिका, मिठा धून चुन्ने रहर ।
अझै पनि लागिरन्छ, किन किन सुन्ने रहर ।
संसार यो एकै पल्ट देख्न पाए हुन्थ्यो जाती ।
चिर्बिर चिर्बिर चराको त्यो बोलीसङ्गै रम्थ्यो छाती ।
अधुरो भो देखी सुनी, दुनियाँमा रम्ने रहर ।
दैव कैले पुर्‍याउँछौ, मेरो देख्ने सुन्ने रहर ?
गजल - मन पराएँ
थाहै छैन कैले बढ्यो, झुकाव मन पराएँ ।
नशै नशा गजल बह्यो, बहाव मन पराएँ ।
भन्थे, कहाँ सजिलो छ? पाउन केही यहाँ,
बित्थै तिखो काँडा बिझ्यो, गुलाव मन पराएँ ।
भाव मेरा पोख्न खोजें, भेटिन शब्द कुनै,
कठै!कागज रित्तै रह्यो, अभाव मन पराएँ ।
सुख दु:ख तौली हेरें, बराबर हुन्छ भन्थे,
भलै पीडा माथि पर्‍यो, हिसाब मन पराएँ ।
हार्नु तेरो धर्म हैन, चिच्यायो यो मन जब,
अझै 'जितु' अघि सर्‍यो, लगाव मन पराएँ !!